मध्यराति प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटबाट रुदै बाहिरिन बुहारी, के भयो खास ? – Rastriyapatrika
मध्यराति प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटबाट रुदै बाहिरिन बुहारी, के भयो खास ?
प्रकाश दाहालको निधनमा उनका दुई श्रीमतीको रोधन करुणदायी थियो । बुबा प्रचण्ड र आमा सिताको विक्षिप्तताले देशै सोकमय देखिन्थ्यो । वियोगका बीचमा प्रचण्ड परिवारमा दुई बुहारीको मिलन चर्चाको विषय बन्यो । तर, बाहिर चर्चा भएजस्तो यो मिलनले सार्थक रुप लिन सकेन । लाजिम्पाटको ताला बुझेकी भनिएकी विवाहित बुहारी सृजना लाजिम्पाटबाट बाहिरिएकी छिन् ।सृजनालाई दाहाल परिवारले पहिलेजस्तै अलग बस्न दबाब दिएको बुझिएको छ । प्रकाशको दाहसंस्कारपछि आर्यघाटबाट सृजना आफ्नै हिसाबले लाजिम्पाट पुगेकी थिइन् । उनको आगमनलाई प्रचण्डले परिवारकै सदस्यमा गुपचुप राखेका थिए ।
प्रकाशकी कान्छी श्रीमती बिना र आमा सितालाई सृजनापनि निवासमा रहेको जानकारी दिइएको थिएन । कञ्चनपूरबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार समेत रहेकी बिना मगरले सृजना निवासमै रहेको थाहा पाएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको बताइएको छ ।चितवनमा आयोजित शोकसभामा सृजना र उनीतर्फका प्रकाशका छोरा प्रशिद्ध पनि जान चाहेका थिए । माओवादी निकट स्रोतका अनुसार बिनासमेतको जोडबलले उनी रोकिइन् । सृजनाले लाजिम्पाटको ताला चाबी बुझेको समाचार आएपनि उनी लाजिम्पाटको एउटा कोठामा मात्र सिमित रहने गरी दिन गुजारेकी थिइन् ।प्रचण्ड निवासमा आयोजित शोकसभामा दुबै बुहारी घरबाट बाहिर निस्किन पाएनन् । सो कार्यक्रममा सहभागी हुन बिना चुनावी कार्यक्रमबाट रातारात फर्किएकी थिइन् ।
सृजनाले प्रकाशको श्रद्धान्जली कार्यक्रममा आफू सहभागी हुन किन नपाउने भन्ने अडान लिएपछि सन्तुलन मिलाउन बिनालाई पनि रोकिएको लाजिम्पाट निकट स्रोतले बतायो । बिनाले सृजनालाई घरमा राख्न नहुने भन्दै सासूससुरा र अमाजु रेणुलाई दबाब दिएको बुझिएको छ ।शोकमा रहेका दुईको आपसी मिलन भइदिए प्रचण्ड परिवारमा केही भएपनि राहत मिल्ने आम चाहना कम्तिमा पनि अहिलेलाई अपूरो रहेको छ । यसबारेमा बुहारी सृजना र बिनासँग सम्पर्क गर्ने नेपाल आजको प्रयास बिफल रह्यो । सृजना पहिलेकै डेरामा साँझपख पुगेको र बिना लाजिम्पाटमै रहेको स्रोतले जानकारी दियो ।